Madaxweynaha Somaliland oo Kulan La yeeshay Gudida Afrika u qaabilsan Aqalka Senate-ka USA | Salaan Media
Madaxweynaha Somaliland oo Kulan La yeeshay Gudida Afrika u qaabilsan Aqalka Senate-ka USA
Washington (SM)- Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ku gudo jira socdaalka shaqo ee uu ku marayo dalka Maraykanka ayaa maanta aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill kula kulmay Senator Jeff Flake oo ka tirsan Gudida arrimaha Afrika u qaabilsan aqalka odayaasha ee dalka Maraykanka.
Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa Senator Jeff Flake uga waramay xaalada guud ee Somaliland iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay, waxaanu u soo jeediyay inay Maraykanku ay Somaliland wax kala qabtaan horumarka dhaqaalaha, siyaasadda iyo qadiyada madax-banaanida Somaliland-ba.
Senator Jeff Flake waxa uu Madaxweynaha uga mahad celiyay booqashada uu ku yimid Maraykanka, waxaanu Somaliland ku bogaadiyay horumarka iyo deganaanshaha ay hirgelisay 22-kii sanadood ee la soo dhaafay.
Senator-ku waxa uu Madaxweyne Axmed Siilaanyo u soo jeediyay inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan sidii loo sii xoojin lahaa horumarka iyo xasiloonida Somaliland ka tisqaaday oo saamayn togan ku leh mandaqada Geeska Afrika.
Senator-ku waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay gacan weyn siiyaan Somaliland si hore loogu sii mariyo dimuqraadiyada iyo dawladnimada Somaliland.